Maitiro Ekuti Uwedzere Pamusoro Penguva Inonyadzisa: 13 Hapana Mazano Anonzwisisika! - Blog
Maitiro Ekuti Uwedzere Kupfuura Kunonyadzisa Kweiyo Awkward Moment
Idzi ndidzo pfungwa dzinomhanya dzakatenderedza musoro wako munguva pfupi inotevera yeiyo tsoka-mumuromo-nguva.
… Mushure mekunge chimwe chinhu chaitika chinokusiya uchinzwa kusununguka uye kushushikana zvekuti mazwi aya anogona kupfuura nemiromo yako:
'Ndingadai ndakafa nenyadzi.'
Zvinoshamisa - uye tad yakanyanyisa - kufunga nezverufu senzira inosarudzika yekuve mumamiriro akadaro.
Asi matama ari kutsva uye tariro yekupererwa nemukana wakafanira kuti uvhure uye kukumedza izere kunzwisisika kwevanhu vazhinji kana vaita kana kutaura chimwe chinhu chisina kukodzera.
Uye ikozvino, mufaro wemufaro, ini ndinoshandisa izwi rangu randinoda: discombobulated .
unoziva riinhi kuti hukama hwako hwapera
Iri izita rakakura-kurira uye, kwandiri, rinonyatsovhara mhinduro yekuzviziva iyo inotevera ipapo kana wapora uye wanyatsoisa tsoka yako mairi.
Ruoko rwako runobhururukira kumusoro kumeso kwako uye iro tsvuku (ehe, kwandiri rinotova neruvara) mhute yekuvhiringidzika inodzika….
… Sekutsva kusingamiswe kunotanga kumuka kubva pamutsipa kuenda kumeso uye moyo wako uchitanga kukwikwidza kunge Usain Bolt wenyika ino: nekukurumidza kwazvo .
Yep, discombobulated zvinondiitira sechipikisheni chakakwana kutsanangura nyadzi mukumuka kwenguva isinganetsi.
Unokunda sei nguva yakadaro?
Chii chaungaite kuti uzviise zvese zvakanaka uye zvechokwadi shure kwako?
Tichapindura iyi mibvunzo munguva pfupi, asi, kutanga, zvakakosha kuyeuka kuti…
Hapana Yemunhu Immune
Vamwe vedu vane makanda makobvu uye vanoona kusagadzikana kwakanyanya kudarika vamwe, asi, kana tiri vakatendeseka, vazhinji vedu tinokwanisa kunyora mienzaniso mishoma ...
… Wodhiropu inokanganisika isingatarisirwi ruzha rwemuviri (chero magumo aanobva!) Amnesia pamusoro pemazita panguva dzakakosha nguva dzekugadzirwa kwezvinhu mukuratidzira…
Rondedzero yezvinobvira faux pas haina magumo.
Idzi inguva muhupenyu hwako iwe waungade kusadzokorora uye pamwe ungatombozama kudzivirira kudzokedzana nepfungwa.
Mushure mezvose, ndiani anoda kudzoreredza kutsetseka uye kusagadzikana paunofungidzira zvakare chiitiko chenyadzi dzako?
Ingo rangarira kuti hausi wega mukunzwa nenzira iyi. Icho chiitiko chepasi rose.
Ko matama ako anoenda akatsvuka pazvinoitika? Unoda kuziva nei?
Iyo Sayenzi Inodzora Blushing
Usati wafunga nezve marongero aunogona kushandisa kuti uwane pamusoro penguva dzakaomarara idzi, ngatitarisei mhinduro yemuviri.
Kazhinji kazhinji izvo kwete, uku kwakadzika kutsvuka kutsvuka.
Sezvo iri maitiro ehungwaru zvachose, nei hunhu uhwu hwashanduka uye hunoshandirei maererano nekupona kwevanhu?
Kunyangwe asiri munhu wese anotsvaira pavanonyara, pazvinoitika, zvinokonzereswa nekumhanya kweadrenaline kuburitswa muhurongwa hwako hwemitsipa.
Izvo zvinokonzeresa kuwedzera kweiyo capillaries inotakura ropa kuganda rako uye, hey presto, njodzi tsvuku iri pauri.
Zvinopikiswa kuti mhinduro yakadaro inooneka pakunyara inogona kunge yakashanduka kuti ibatsire kuchengetedza hukama hwemagariro hwakakosha kumarudzi edu.
varume vanodzoka here vasiya mumwe mukadzi
Dzidziso yacho inoti kunyara kunoratidza kucherechedzwa kwehunhu uye nekudaro kuyedza kuita zvirinani mune ramangwana uye kutevedzera tsika dzevanhu.
Sezvineiwo, avo vanoratidza pachena zviratidzo zvekunyara vari kazhinji kanganwirwa uye kuvimbwa kupfuura avo vasina.
Saka haisi zvachose yakashata manzwiro uye inoshanda yakakosha yemagariro basa kune vanhu.
Zvinorwadza kunyange hazvo zviri, saka, kune kumwe kunyaradzwa mukuziva kuti iko kutsva matama uye kuninipisa kunonyadzisa kweaya anotyisa mazai-pa-kumeso nguva anogona chaizvo kuve chinhu chakanaka - mune mukurumbira matanda, zvirinani.
Chokwadi ichocho chiri bhenefiti yakanaka yekurwisa kusagadzikana kwechinguva chisingaite?
Pfungwa inofanirwa kufunga nezve kunyadziswa ndeyekuti yakabatana kwazvo kukwana zvakakwana .
Paunofunga nezvazvo, iko kutadza kwako kurarama zvinoenderana nezviyero zvako izvo zvinokonzeresa kusimba kwekunzwa.
Kuita kwako hakuna kuenderana neako - pamwe zvisingaite - zvaunotarisira iwe pachako.
Sezvo isu tese tichiziva kuti hapana munhu akakwana, pamwe tinofanirwa kurega kuzvirova isu nekutadza kusvitsa zviyero zvatisingakwanise kuzviitira.
Akakwegura Uye (Zvishoma Zvishoma) Kuchenjera
Ndakaona kuti imwe yemabhenefiti ekukura kugona kudzokera kumashure zvishoma kubva (chaiko) kupisa kwechinguva.
Sezvaunokura, pamwe unotanga hanya zvishoma nezvekuti unoonekwa sei nevamwe .
Mazuva ano, ini ndinoona ndiri kazhinji kugona kuona kuseka pane kutya kana ini ndaita kana kutaura chimwe chinhu icho, munguva yakapfuura, ndingadai ndawana chinokuvadza.
Pandinenge ndiri mumamiriro ezvinhu akadaro, ndinowanzonzwa izwi remudiwa shamwari yakabva kuGerman shamwari (ndiani akadaro, ndinobvuma, ndine ganda rechipembere).
Mhinduro yake yemari kune chero mamiriro ezvinhu apo vamwe vanhu vangave vane dambudziko nechimwe chinhu chavangaita kana kutaura kwaive kushevedzera kuti: 'Bu ** er zem!'
Akabudirira kushandura mamiriro ezvinhu, zvekuti vaive ivo vaiona vaive nedambudziko, kwete iye.
Ini ndinofunga isu tese tinogona kudzidza zvakawanda kubva kuna Ursula wekare uye, kunyangwe kana iwe uine rombo rakaringana kuti usave wakareba muzino seni, maitiro ake akasimba anogona kukubatsira iwe kupindura zvine mutsindo mune inonetsa nguva.
Chapupu? Chii Chapupu?
Isu tese tine tsika yekuzviisa pakati pechisiko, uye nekudaro fungidzira kuti tiri pasi pekugara tichiongororwa zvakanyanya uye kuongororwa nevamwe.
Masayendisiti ezvepfungwa vanotaura nezvechiitiko ichi se iwo mamiriro ekuona , muchidimbu tichipfupisa maitiro edu ekuwedzeredza kuti chitarisiko chedu nezviito zvinoonekwa sei nevamwe.
Chokwadi ndechekuti vanhu havana hanya nesu zvakanyanya kupfuura isu kuvapa mbiri ye…
… Kwete zvirinani nekuti ivo vakaputirwa zvakanyanya mukuzviona ivo pachavo vari pakati pavo chaipo chaipo.
Ivo 'zvapupu' sekuvaona kwavo vanogona kunge vasina kana kunyora zvakaitika.
Iwe uri kubhowa nekunyara kwakanyanya pamusoro pechinhu chavasinga zive.
Iko kutambisa kwemanzwiro uye yakawanda sei isina basa kushushikana iwe yawakaisa pachako kuburikidza nayo.
Ini handisi wandinofunga kuti ndiri…
In chinyorwa ichi , Therese J. Borchard anoratidzira chirevo ichi chinonzwisisika:
Ini handisi wandinofunga kuti ndiri. Kana neni handisi iye waunofunga kuti ndiri. Asi ini ndiri uyo wandinofunga iwe unofunga kuti ndiri.
Iwe ungatofanira kuzvidzokorora kashoma (Ndakaona kuti kuzvitaura zvinonzwika zvakabatsira kuti zvive zvine musoro) usati wanyatso kuwana zvazvinoreva.
Chinokosha ndechekuti isu tinowanzo tenderera hwaro hunhu hwedu on zvatinofunga vamwe vanhu funga nezvedu.
Isu tinoita fungidziro dzakakura dzekuti ivo vari kuita kune chero isu zvatakaita neimwe nzira.
Asi fungidziro dzedu dzinogona kunge mamaira akapamhama.
Nekudaro, tiri kuvakira maitiro edu panjodzi yedu pane izvo zvatinofunga maitiro avo ...
… Asi zvese kufungidzira.
Asizve kutambisa simba!
Kana Iwe Ukambonzwa Benzi, Izvi Zvichakutendisa Iwe Kuti Hausi
Sei Kumira Kuita Izvo Zvakafanana Zvikanganiso Zvakare Uye Zvakare
8 Nyore Nzira dzekumisa Negative Pfungwa Kubva Kupinda Pfungwa Dzako
Matanho Okuti Ukwanise Kupfuura Nguva Inonyadzisa
Nekudaro, kana iri mhinduro yepamoyo, pane matanho iwe aunotora kuti udzikise marwadzo enguva dzino dzakaomarara?
Unogona here kudzidza kuzvibata nerumwe runyararo uye zvishoma kunyara?
Heano mazano mashoma ekukupa chikafu chekufunga…
Kuseka Ndiwo Mushonga Wakanyanya
Hazvisi nyore nguva dzose (kana kunyangwe zvakakodzera) ku shandisa zvinosetsa kubvisa kunyadziswa kubva pauri, asi inzira huru yekudzoreredza kubva pane inonyadzisa mamiriro kana iwe uchigona kuibvisa.
Sezvambotaurwa pamusoro apa, kungoratidza kuti unonyara inzira yekugadzira kubatana nevamwe…
… Uye nekudaro kuri kuseka pamwe chete.
Nekudaro, kana iwe uchigona kuwana nzira yekuona inosetsa divi, iwe ungamutsa isingatarisirwe hurukuro kana kutoita shamwari nyowani.
Iyo yainyatso kuve nzira yekushandura iyo inogona kukura yakakura kuita yakanaka.
chii chaunoita kana wako wakaboora kumba
Mune ino yakaipa mamiriro ezvinhu, zviri kuyedza kwazvo kupinda munzira yekuramba, asi kana vamwe akaita pupurira chiitiko ichi, iwe unongo tarisa kupusa kana ukaedza kunyepedzera kuti hazvina kuitika.
Iwe haugone kudzosa iyo nguva.
Nzira yakanakisa ndeye kufesa uye kubvuma kuti unonyara.
Kukanganisa munhu, sekutaura kwekare, uye mikana stock yako inomuka kana iwe wakavhurika uye wakatendeseka nezve yako faux pas.
Ndiani anoziva, kutendeseka kwako kunogona kukurudzira vamwe kuti vavhure uye vagovana zvavo zviitiko zvinonyadzisa.
Hapana imwe nzira iri nani yekudzidza kuti hausi wega uri mukubata nekusuwa kwako.
Kuchinja mutambo kuita dambudziko nekukanda kuzere-kwekukwikwidza kana kuchema mukumira kwechiitiko chinonyadzisa haimbove mhinduro kwayo.
Kunyangwe paunenge uchinzwa kuda kuita kudaro, ramba.
Kunyanya kukakavara kwaunoita, ndipo panonyanya kurangarirwa iyo nguva ichave yevamwe, uye zvakanyanya kuitika chiitiko chichava.
Batisisa kuziva kuti inguva chete uye, zvisinei kuti zvinorwadza sei, zvichapfuura uye hupenyu huchaenderera mberi (hongu, zvichaita, kunyangwe iwe wanga uine iyo 'ndoda kufa pane kutarisana neiyi' kufunga).
Kunyanya paunogona kudzikisira pasi zvakaitika, vanhu vashoma vanogona kuita chibvumirano chikuru. Uye zvishoma vangangove vachizozvirangarira.
Kukwidza kwemoyo uye kuwedzerwa kweropa, kupfupika kwemweya, kumhanya kweropa kumeso, ziya rinowedzera…
..seaya ndemhinduro dzepamoyo kune chinonyadzisa.
Vanogona, nekufunga kwakasimba uye nesimba, kuderedzwa.
Tora kufema kwakadzika uye zvipe iwe nguva yekuongororazve mamiriro acho ezvinhu. Izvi zvichaita chaizvo batsira kukudzikamisa uye kudzikisira iyo pesky auto-mhinduro.
Izvo zvakare zvinoderedza mikana yekuti iwe uite kana kutaura chero chinhu chingangowedzera kukunyadzisa kwako uye panjodzi yekuita kuti mamiriro acho anyanye kutyisa.
Dzidza Kubva Pazvikanganiso Zvako
Iyi haisi rocket science.
Zvichitaurwa zvakapusa, iwe hausi kukanganisa kwako.
Iko kukanganisa kunokosha pakudzidza kwako uye kukura semunhu wenyama. Ivo vanoumba chikamu chemhuri yezviitiko zvehupenyu hwako.
Asi iwe unofanirwa kuedza nesimba kuti udzidze kubva kwavari.
Ndicho chikonzero nei zvichikosha kwazvo kutora nguva shoma yekufungisisa kuti nei uye nei zvakaitika.
Kana iwe wakazvinyadzisa iwe nekunyatso fluffing mharidzo nekuti iwe wanga usati watarisa techy zvinhu zvisati zvaitika, ita shuwa kuti iwe kaviri-tarisa inotevera nguva.
Kana iwe ukagumburwa uchidzika masitepisi ukanomhara mumurwi pamberi peVP iwe waiyedza kufadza, ita shuwa yekutarisira zvakanyanya mune ramangwana (uye pamwe uchachera mhondi zvitsitsinho?).
Kutsunga kudzidza kubva kuzviitiko zvakadaro imwe nzira inoshandura isina kunaka kuita yakanaka.
Usafungidzira Iyo Inotarisa iri Pauri
Kufungisisa kumashure kwechiitiko chemwenje chandataura pamusoro, edza kuwana maonero pamamiriro ezvinhu.
Ziva kuti iwe haungangove wakave wakanyanya kutariswa kune chero munhu uye uye, dai iwe uri, zvaingova zve nanosecond chete.
Kana iwe uchikwanisa kubhenekera pamusoro penguva isingafadzi nekuseka kushoma uye kushomeka kushoma, munhu wese achadzokera pakufunga nezvake munguva pfupi uye nguva yako inonyadzisa ichapera.
kuoma sei kuwana
Uye Ndakafunga Iwe Uri Shamwari Yangu…
Kazhinji kazhinji, ishamwari dzedu nehama dzinogadzira mari kubva muzviitiko zvinonyadzisa izvo isu tingasarudza kukanganwa.
Kuseka kukuru kunogona kubviswa kubva panguva dzakadai nekubhadharira kwako: iyo nguva yawakagadzira mubairo chump wega.
Hirarious panguva uye mafaro achiri neese kutaurira - kana saka ivo vanofunga - uye, mukomana, madiro avanokuita kuona kusagadzikana kwako.
Wese munhu anotya kubatwa mune isina kunzwisisika nguva uye achitaridza kupusa, saka zvinongoitika kuti wako wepedyo uye waunoda angasarudza kutarisa pane zvako faux pas kwete zvavo.
Kunyange kukwezva kwezviitiko zvakadaro kunogumbura, kuseka kwakadaro kunongoitika. Uye paunowedzera kusvetuka, hurefu hwengano huchawedzera.
Kushandisa kuseka kuratidza kuti waenderera mberi uye hauchanyadziswa nezviitiko zvakapfuura ndiyo nzira yakanakisa yekuparadzira mamiriro acho ezvinhu.
Kana iwe ukave unozvidzivirira, mhinduro yavo iri pachena ichave yekuenderera mberi nekurwiswa kwavo uye vafarire mukusagadzikana kwako.
The Crux Of The Nyaya…
Zvatakadzidza kubva pamusoro ndezvekuti iwe une sarudzo mbiri:
rega pfungwa yekuninipisa kunyadziswa ikukanganisa.
ita yako nhanho yekuregedza ichienda, uchishandisa mamwe emazano ari pamusoro.
Sarudzo inogara iri yako, asi rairo yangu ndeyekutarisa kana chiitiko ichi chakakodzera kukanda mumvuri wekusaremekedza pamusoro pehupenyu hwako.
Uri kuenda kuirega ichikanganisa kuzviremekedza kwako uye nemafungiro ako akajairika here?
Unogona kunzwa kuti uri pakati padanho kana idzi nguva dzisingafadzi dzichiitika, dzakasungirirwa pachitsuwa chako chega chekunyadziswa.
Sezvatakadzidza, zvakadaro, kugona kwako kwekunzwa kunyara kunokusanganisa iwe zvakanyanya kune vamwe vanhu vese.
Chokwadi, ipapoka, zviitiko zvakadaro zvinofanirwa kuonwa sezvakanaka kupfuura zvakaipa uye kumbundirwa zvinoenderana.
zvekutaura kune mumwe munhu waunoda
handizive kuti ndotaura sei zvandinonzwa
ndakadanana newe sei
zviratidzo zvekusaziva mupfungwa muvanhu vakuru
maitiro ekuchinja pasirese